Fanarahan-dia :: Lavo ny dahalo nangalatra omby roa • AoRaha
Fanarahan-dia Lavo ny dahalo nangalatra omby roa
Nifankahatratra ny mpanara-dia sy ireo dahalo roa lahy avy nangalatra omby roa tany Ambohitompoina Antanifotsy, ny alin’ny talata lasa teo. Maty voatifitra ny iray tamin’ireo olon-dratsy. Azo sambo-belona ny namany. Tafaverina ny omby halatra.
Tamin’ny enina ora hariva no nangalaran’ireo dahalo an-tsokosoko ny omby tany Ambohitompoina. Nifarimbona tamin’ny fanenjehana ny fokonolona sy ny zandary telo lahy. Ora vitsy taorian’izay, tratra ireo malaso. Efa nampitandremana hijanona iretsy farany saingy tsy nanaiky mora ka niafara tamin’ny fitifirana.
Omby roa ihany koa no nisy nandroba tany Antsampandrano, mbola any amin’ny distrikan’Antanifotsy, ny alin’ny alatsinainy lasa teo. Hita nifatotra tany amin’ny 40km miala ny tanàna ireo omby ireo. Tsy hita popoka ny olona nangalatra azy.
Fanaovana takalon’aina :: Voatifitry ny polisy ilay lehilahy nanambana basy tovovavy